Arsenal Oo Si Bilaash Ah Kula Wareegeysa Xiddig Premier League Wacdarro Ka Dhigay Xilli Ciyaareedkii Hore - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Arsenal Oo Si Bilaash Ah Kula Wareegeysa Xiddig Premier League Wacdarro Ka...
Arsenal ayaa lagu waramayaa inay ku horeyso saxiixa Ryan Fraser kaasoo xor noqonaya marka uu dhamaadka xilli ciyaareedka.
Inay si bilaash ah kula soo wareegaan xiddiga garabka ka ciyaara ee Bournemouth ayaa ka mid ah qorshahayaasha ugu muhiimsan ee Gunners inkastoo xiddigaan uu hoos u dhac ku yimid.
15 caawin iyo todoba gool ayaa loo diiwaangeliyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay taasoo keentay in xagaagii hore lala xiriiriyo inuu baxayo, laakiin Fraser oo 26 sanno jir ah ayaa sii joogay Bournemouth.
Laakiin waxa uu ku guuldareystay xilli ciyaareedkan inuu dib u helo qaab ciyaareedkiisii fiicnaa isagoo sameeyay kaliya afar caawin iyadoo Bournemouth ay u dagaalameyso inay ka badbaado inay u dhacdo heerka labaad.
Sida ay sheegtay idaacada TeamTalk, kooxda Mikel Arteta ayaa weli dooneysa xiddiga reer Scotland, waxayna hogaaminayaan kooxo dhowr ah oo saf ugu jira ciyaaryahanka.
Arsenal ayaa la sheegayaa inaysan heysan lacag badan oo ay qarashgareeyaan suuqa kala iibsiga xagaaga taasoo ay ugu wacan tahay dhaqaale xumada uu sababay caabuqa coronavirus iyo inay seegayaan u soo bixitaanka Champions Leagie
Previous articleKyle Walker Oo Raaligelin Ka Bixiyay Fadeexadii Uu Ku Kacay & Man City
Next articleUS, Somalia Conduct Airstrike Against Al-Shabab Terrorist Group